ပေါင်းစည်း၏တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ BT APU ပေါင်းစည်း Chuck, Precision ပေါင်းစည်းလေ့ကျင့်ခန်း Chuck Drilling, BT ပေါင်းစည်း Chuck Drilling, Chuck Drilling
Home > ထုတ်ကုန်များ > Chuck System ကိုတူးပေါင်းစည်းလေ့ကျင့်ခန်း Chuck
ပေါင်းစည်းလေ့ကျင့်ခန်း Chuck ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, ပေါင်းစည်းလေ့ကျင့်ခန်း Chuck, BT ပေါင်းစည်းလေ့ကျင့်ခန်း Chuck ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, BT APU ပေါင်းစည်းလေ့ကျင့်ခန်း Chuck R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
C20-APU13 လမျးဖွောငျ့ပေါင်းစည်း Keyless လေ့ကျင့်ခန်း Chuck
Morse က Taper နှင့်အတူ C20 Intergrated Keyless လေ့ကျင့်ခန်း Chuck
High Quality CAT40-APU13 ပေါင်းစည်းလေ့ကျင့်ခန်း Chuck
မြင့်မားသော Precision BT-APU CNC ပေါင်းစည်းလေ့ကျင့်ခန်း Chuck
မြင့်မားသော Precision BT-APU CNC ပေါင်းစည်းလေ့ကျင့်ခန်း-Chuck
DIN69871 40 APU13 ပေါင်းစည်း Keyless လေ့ကျင့်ခန်း Chuck
High Quality NT40-APU13 Intergrated လေ့ကျင့်ခန်း Chuck
မြင့်မားသော Precision NT40-APU CNC ပေါင်းစည်းလေ့ကျင့်ခန်း Chuck
BT40-APU13-110 ပေါင်းစည်း Keyless လေ့ကျင့်ခန်း Chuck
R8 Shanks နှင့်အတူပေါင်းစည်းလေ့ကျင့်ခန်း Chuck
C20-APU16 လမျးဖွောငျ့ပေါင်းစည်း Keyless လေ့ကျင့်ခန်း Chuck အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: 1.Material: tool ကိုသံမဏိ 2.High တိကျမှန်ကန်မှုကိုလေ့ကျင့်ခန်း Chuck ဖြောင့် Shanks နှင့်အတူ 3.Automatic သော့ခတ်လေ့ကျင့်ခန်း Chuck Taper-လျောက်ပတ်သို့မဟုတ် Thread နှင့်အတူ 4. လေ့ကျင့်ခန်း Chuck တပ်ဆင်ထား ကျွန်ုပ်တို့၏ TELI Tool...
Morse က Taper နှင့်အတူ C20 Intergrated Keyless လေ့ကျင့်ခန်း Chuck အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: 1.Material: tool ကိုသံမဏိ 2.High တိကျမှန်ကန်မှုကိုလေ့ကျင့်ခန်း Chuck ဖြောင့် Shanks နှင့်အတူ 3.Automatic သော့ခတ်လေ့ကျင့်ခန်း Chuck Taper-လျောက်ပတ်သို့မဟုတ် Thread နှင့်အတူ 4. လေ့ကျင့်ခန်း Chuck တပ်ဆင်ထား ကျွန်ုပ်တို့၏ TELI Tool...
High Quality CAT40-APU13 ပေါင်းစည်းလေ့ကျင့်ခန်း Chuck High Quality CAT40-APU13 ပေါင်းစည်း Chuck, လျှောက်လွှာအကွာအဝေး Drilling: ကလစ်အချင်း: 0.5-16mm နည်းနည်း .Mechanical ဗိုင်းလိပ်တံနဲ့ဖြတ်တောက်ကိရိယာများနှင့်ရှေးခယျြသည်အခြားအ accessories.High Precision CAT Shanks Tool ကို Holder, မျှမျှတတ G6.3 သို့မဟုတ် G2.5 ။...
မြင့်မားသော Precision BT-APU CNC ပေါင်းစည်းလေ့ကျင့်ခန်း Chuck BT APU self-စွဲစေ Drilling Chuck, လျှောက်လွှာအကွာအဝေး: ကလစ်အချင်း: 0.5-16mm နည်းနည်း .Mechanical ဗိုင်းလိပ်တံနဲ့ tools တွေကိုဖြတ်တောက်နှင့်အခြား accessories.High Precision BT Shanks Tool ကို Holder, ရှေးခယျြများအတွက်မျှမျှတတ G6.3 သို့မဟုတ် G2.5 ။...
DIN69871 40 APU13 Intergrated Keyless လေ့ကျင့်ခန်း Chuck DIN69871 40 APU13 ပေါင်းစည်း Keyless လေ့ကျင့်ခန်း Chuck, လျှောက်လွှာအကွာအဝေး: ကလစ်အချင်း: 0.5-16mm နည်းနည်း .Mechanical ဗိုင်းလိပ်တံနဲ့ tools တွေကိုဖြတ်တောက်နှင့်အခြား accessories.High Precision SK ကို Shanks Tool ကို Holder, မျှမျှတတ G6.3 သို့မဟုတ်ရှေးခယျြသည်...
High Quality NT40-APU13 Intergrated လေ့ကျင့်ခန်း Chuck NT APU self-စွဲစေ Drilling Chuck Arbore, လျှောက်လွှာအကွာအဝေး: ကလစ်အချင်း: 0.5-16mm နည်းနည်း .Mechanical ဗိုင်းလိပ်တံနဲ့ tools များနှင့်အခြား accessories.High Precision NT Shanks Tool ကို Holder ဖြတ်တောက်, ရှေးခယျြများအတွက်မျှမျှတတ G6.3 သို့မဟုတ် G2.5 ။...
မြင့်မားသော Precision NT40-APU CNC ပေါင်းစည်းလေ့ကျင့်ခန်း Chuck စက်မှုဗိုင်းလိပ်တံနဲ့ဖြတ်တောက်ခြင်း tool ကိုများနှင့်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်း tool ကိုချိတ်ဆက်မှုအတွက် NT Tool ကိုရှင်။ ရိုးရှင်းသော, လူကြိုက်များဗိုင်းလိပ်တံ Shanks ကွန်နက်ရှင်စံ, အဓိကအားဖြင့် NT30 NT40 NT50 ... etc ဖြစ်ပါတယ် .....
BT40-APU13-110 ပေါင်းစည်း Keyless လေ့ကျင့်ခန်း Chuck BT APU ပေါင်းစည်း Keyless Drilling Chuck, လျှောက်လွှာအကွာအဝေး: ကလစ်အချင်း: 0.5-16mm နည်းနည်း .Mechanical ဗိုင်းလိပ်တံနဲ့ tools တွေကိုဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ရှေးခယျြသည်အခြားအ accessories.High Precision BT Shanks Tool ကို Holder, မျှမျှတတ G6.3 သို့မဟုတ် G2.5 ။...
BT40-APU13-110 ပေါင်းစည်း Keyless လေ့ကျင့်ခန်း Chuck ကလစ်အချင်း: 0.5-16mm နည်းနည်း .Mechanical ဗိုင်းလိပ်တံနဲ့ဖြတ်တောက်ရေးကိရိယာများနှင့်အခြား accessories.High Precision BT Shanks Tool ကို Holder, မျှမျှတတ G6.3 သို့မဟုတ်ရှေးခယျြသည် G2.5 BT APU, လျှောက်လွှာအကွာအဝေး Keyless လေ့ကျင့်ခန်း Chuck ပေါင်းစည်း။...
R8 Shanks နှင့်အတူပေါင်းစည်းလေ့ကျင့်ခန်း Chuck ပြုပြင်အားထုတ်လေ့ကျင့်ခန်း Chuck ၏ကျဆင်းနေ၏ရှောင်ကြဉ်ပါ။ CNC စာနယ်ဇင်းလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်အဆုံးကြိတ်ဘို့အမြင့်တိ တစ်ဦး Spanner နှင့်အတူလွယ်ကူသောစစ်ဆင်ရေး။ 1.Material: tool ကိုသံမဏိ 2.High တိကျမှန်ကန်မှုကိုလေ့ကျင့်ခန်း Chuck ဖြောင့် Shanks နှင့်အတူ 3.Automatic...
တရုတ်နိုင်ငံ ပေါင်းစည်းလေ့ကျင့်ခန်း Chuck ပေးသွင်း
ကျနော်တို့ Tool ကိုပင်စက်ရုံအဓိကအားဖြင့်အပါအဝင် tool ကိုကိုင်ဆောင်သူများစီးရီးထုတ်လုပ်
ER Collets, ဒါပေါ်မှာ collets နှိပ် CNC တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစင်တာများ, ဘက်ပေါင်းစုံ key ကိုလျော့နည်းလေ့ကျင့်ခန်း Chuck နှင့်။
1.Material: tool ကိုသံမဏိ
2.High တိကျမှန်ကန်မှုကိုလေ့ကျင့်ခန်း Chuck
ဖြောင့် Shanks နှင့်အတူ 3.Automatic သော့ခတ်လေ့ကျင့်ခန်း Chuck
Taper-လျောက်ပတ်သို့မဟုတ် Thread နှင့်အတူ 4. လေ့ကျင့်ခန်း Chuck တပ်ဆင်ထား
Mills Chuck ၏အပေါက်အမိန့်လျှောတားဆီးလျက်, Clamp အင်အားတိုးမြှင့်ဖို့အတွက်ခြောက်လုံး slot နှစ်ခုအလျားလိုက်အပေါက်။
အခါဆေးထိုးအပ်ကိုလှိမ့ပွတ်တိုက်အားမှလျှောသည့်အခါနှစ်ဝါယာကြိုး devices များအောင်
collet တပ်ဆင်ထား tool ကိုဖြတ်တောက်၏ကောက်ပဲသီးနှံများကိုဖြစ်ပျက်ထံမှ collet ပျက်စီးသို့မဟုတ်ဖယ်ရှား-ရှုးအမှုအရာအတွက်ရရှိလာတဲ့ non-လုံးဝချုပ်ကိုင်ထားကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်အဆိုပါထိရောက်သော Clamp အရှည်ချဲ့ထွင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
BT ပေါင်းစည်းလေ့ကျင့်ခန်း Chuck
BT APU ပေါင်းစည်းလေ့ကျင့်ခန်း Chuck
CNC ပေါင်းစည်းလေ့ကျင့်ခန်း Chuck